अनुसन्धानको निष्कर्ष : कति दिनपछि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्कोमा कोरोना भाइरस सर्दैन ? « Nagarik Khabar
अनुसन्धानको निष्कर्ष : कति दिनपछि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्कोमा कोरोना भाइरस सर्दैन ?
प्रकाशित मिति : 1 August, 2020 1:59 pm
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लिएर संसारभर विभिन्न प्रकारका अध्ययन भइरहेका छन् । अनुसन्धान हुँदैजादा नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ अध्ययनले कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले ९ दिनपछि अर्को व्यक्तिमा कोरोना सार्न नसक्ने देखिएको छ ।
मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्टमा ७९ तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नौ दिनपछि कोरोना संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्दैन । अनुसन्धानकर्ता मुग केभिक र एन्टोयिाले यसको थप विश्लेषण आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।
तर, अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल आएएनए बिरामीको घाटीमा औसतमा १७ देखि ८३ दिनसम्म रहन्छ । यो सरुवा नहुने पत्ता लागेको छ । पिसिआर रिपोर्टमा कमजोर आएएनए फेला पर्छ, जुन अरु व्यक्तिलाई सार्न असक्षम हुन्छ ।
अध्ययनमा श्वास नली र दिशामा लामो समयसम्म कोरोना रहन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताले भन्छन्, कयौँ अध्ययनले सुरुवाती दिनमा मानिसको शरीरमा भाइरसको संख्या अधिक हुन्छ । पाँचदिनसम्म कोरोना सर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । धेरै बिरामीले नौ दिनपछि मात्र पिसिआर टेष्ट गर्ने भएकाले उनीहरुबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना हुँदैन ।
अनुसन्धानकर्ताले लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई फेरि कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुने दावी पनि गरेका छन् । रसियन वैज्ञानिकहरुले भने पानीमा परेपछि कोरोना भाइरस लामो समयसम्म बाँच्न नसक्ने बताएका छन् ।
घटे कोरोनाका सक्रिय संक्रमित : देशभर ३४ सय ५२ जना मात्रै
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव नेपालमा बिस्तारै घट्दै गएको
आजदेखि खोप सात वटै प्रदेशमा पठाइँदै
काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ आजदेखि सातवटै प्रदेशमा पठाउन थालिएको छ । भारत सरकारले
नारायण ढङ्गाना काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंको सडकबाट उद्धार गरिएकी शोभा मानवलाई झण्डै निको बनाउन
तनहुँ । सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।